Kana zvasvika pakuedza kwekuyedza uye zviitiko, marathons ari pakati pesarudzo dzakakurumbira kunze uko. Marathon inobvumira vamhanyi kuti varatidze simba ravo, kugona uye kuzvipira kune yavo yerudo kana mutsigiri wesarudzo nezvakajairwa marathon zvigadzirwa. Hapana chinhu qu ...Verenga zvimwe »
Kana iwe uri unoshingairira beachgoer, surfer kana wemvura mwana, mikana iwe wakanyunyuta pamusoro pekufanirwa kukwidza pamusoro pegirazi rezuva nguva dzese paunotendeuka. Mushure mezvose, zvinokurudzirwa kunyorera zvekare sunscreen maawa maviri ega kana zvakadaro - kunyanya kana iwe uchisendeka kure, swimmi ...Verenga zvimwe »
Chii chinonzi triblend jira? Nei ichinyanyo kufarirwa?
Nei iyo triblend t shirt iri yakanaka kupisa? Kana mutengi wangu achitsvaga rairo yekusarudza zvinhu zvekuita t shirt yenguva dzose, ndine chokwadi chekuzvikurudzira. Kana iwe ukandibvunza kuti sei, ini ndaikuudza kuti triblend tee ndicho chinhu chakapfava chaungambobata. Sezvaungave wafungidzira f ...Verenga zvimwe »